Ny fankahalain'ny UNWTO ho an'ny WTTC dia misy sary fitiavana iray sioka
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovaom-panjakana » Ny fankahalain'ny UNWTO ho an'ny WTTC dia misy sary fitiavana iray sioka
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • fivoriana • Vaovao • People • fanorenana • Vaovao Mafana Arabia Saodita • Vaovao Mafana Espaniola • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao farany momba ny UK
Julia Simpson, ny tale jeneralin'ny WTTC vaovao, sy Zurab Pololikashvili, sekretera jeneralin'ny UNWTO, dia niara-nisakafo hariva mahafinaritra tany London.
Ity no kinova natokana ho an'ny sary izay vao bitsika nataon'ny mpanolotsaina UNWTO Anita Mendiratta.
Mampalahelo fa tsy ity no tantara feno.
Tratra tao anaty afo i Maribel Rodriguez, VP ho an'ny World Travel and Tourism Council.
Miaraka amin'ny fanentanan'i Arabia Saodita ny mety hisian'ny famerenana amin'ny laoniny ara-bola ny fizahan-tany manerantany, ny politika efa napetraka tsy miraharaha ny sehatra tsy miankina sy ny tsy fisian'ny fandrindrana COVID-19 ara-potoana ataon'ny UNWTO dia tsy maharitra intsony.
Ny fipoahan'ny fandavana ny WTTC avy amin'ny Sekretera jeneralin'ny UNWTO, Zurab Pololikashvili, teraka tamin'ny 1977, dia mila fanamboarana maika.
Ilay mpanolotsaina ambony sy mpanolotsaina an'ny sekretera jeneralin'ny UNWTO roa farany, Anita Mendiratta, dia tonga namonjy tamin'ny sary tsy dia faly loatra nalainy tao amin'ny trano fisakafoanana iray any London.
Krizy ny fizahantany, ary ny mpiara-miombon'antoka rehetra sy ny governemanta miara-miasa no làlana tokana mandroso. Ny UNWTO no faningana lehibe.
Ity fiheverana ity dia tsy maintsy niova niaraka tamin'ny Saudi Arabia vonona ny hivoaka ho mpitarika amin'ity toe-javatra ity ary hametraka ny vola ao aoriany, amina miliara dolara natokana hanampiana ny toekarem-pizahantany manerantany.
Toy ny tantara fitsikilovana iray, niditra an-tsehatra i UNWTO Zurab Pololikashvilli, notarihin'ilay mpanolotsaina ambony indrindra, Anita Mendiratta. Zurab dia tsara nitarika hatrany nifototra tamin'ny fahatsapana. Tamin'ny fampiasana ny anarana tsara an'ny CEO WTTC ho avy tsy fantatra dia novahana ny milina fampielezan-kevitr'i Zurab, ary tratra izy.
Tadidinao? Tamin'ny Mey 2017 ity
Ny sekretera jeneralin'ny UNWTO, Taleb Rifai, dia naneho ny fankasitrahany tanteraka ny World Travel & Tourism Council (WTTC) noho ny fiaraha-miasa matanjaka teo amin'ny roa tonta.
Nandritra izay enin-taona lasa izay, ny UNWTO sy ny WTTC dia namorona fiaraha-miasa matanjaka, nampivondrona ireo sehatra ho an'ny daholobe sy tsy miankina hampandroso ny fizahantany ary hiatrika ny laharam-pahamehana indrindra.
Tao amin'ny UNWTO sy WTTC Open Letter on Travel and Tourism Initiative natomboka tamin'ny 2011, dia nahazo fanampiana avy amin'ny Lehiben'ny fanjakana sy governemanta 80 manerantany. Miaraka amin'ity hetsika ity, UNWTO sy WTTC dia mikendry ny hampiroborobo ny maha-zava-dehibe ny sehatry ny fizahantany amin'ny fampandrosoana ara-tsosialy sy ara-toekarena amin'ny ambaratonga avo indrindra.
Ity fiaraha-miasa eo amin'ny UNWTO sy WTTC ity dia nijanona ho matanjaka hatramin'ny 31 desambra 2017. Ny fahatsapana ny maha-zava-dehibe ny fiaraha-miasa amin'ny sehatra tsy miankina amin'ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina dia zava-dehibe ho an'ny Sekretera jeneraly Taleb Rifai ny manasa ny tale jeneralin'ny WTTC, Gloria. Guevara, hanatrika ny Fivoriamben'ny UNWTO ao Chengdu, Sina, amin'ny 2017.
Ny tale jeneralin'ny WTTC tamin'ny taona 2017, Gloria Guevara, dia minisitry ny fizahan-tany ho an'i Mexico tamin'ny 2011. I Mexico no firenena voalohany tamin'ny Febroary 2011 niaraka tamin'ny sonian'ny filoha Mexico Calderon nanao sonia ny fandraisana andraikitra nataon'ny fizahantany UNWTO / WTTC ho an'ny lohan'ny fanjakana 80 manerantany.
Ny minisitry ny fizahantany meksikana, Gloria Guevara, avy amin'ny indostria tsy miankina, dia nahatakatra tsara ny maha-zava-dehibe ny fiaraha-miasa amin'ireo sehatra roa (tsy miankina sy ny daholobe).
Tsy fantatra tamin'ny 2017 fa ny sekretera jeneralin'ny UNWTO izay vao voafidy, Zurab Pololikashvili, dia nanana tetika hafa ary tsy nampiditra WTTC izy ireo.
Ny fiovan'ny UNWTO nandritra ny alina tamin'ny 1 Janoary 2018
Tamin'ny 1 Janoary 2018 i Zurab Pololikashvili no nandray ny fitarihan'ny UNWTO.
Telo taona aty aoriana dia manaiky ny manam-pahaizana fa tsy tokony ho afaka nanao an'io mihitsy izy.
Mitohy ny fanodikodinana UNWTO hiantohana ny fifidianana indray ny sekretera jeneraly Zurab Pololikashvili.
Maninona ny Sekretera jeneralin'ny UNWTO Zurab Polokashvili no tsy voafidy araka ny tokony ho izy?
Ilay sekretera jeneralin'ny UNWTO ho avy izay niasa ho masoivoho any Madrid ho an'ny fireneny, ny Repoblikan'i Georgia, dia tsy nanana traikefa tamin'ny sehatra tsy miankina sy ny fizahantany.
Noho i Zurab nandray ny fitarihan'i UNWTO, IATA, ICAO, ary WTTC dia tsy nahajoro intsony.
Amin'ny taona 2018 UFivoriamben'ny vondrom-paritra NWTO any St. Petersburg, Rosia, Nanafoana ny ankamaroan'ny drafitra i Zurab WTTC handray anjara amin'ny fandaharam-potoana ofisialy ary nampipetraka ny CEO WTTC hipetraka ao ambadiky ny efitrano.
Zurab tsy nahomby nanentana ny seho fitsangatsanganana Espaniola, FITUR, hanasa tsy hanasa WTTC amin'ny 2019.
Zurab dia naniry ny tsy hahombiazan'ny Vovonana Global WTTC tamin'ny Mey 2021 tao Cancun ary nanosika ny Governemantan'ny Repoblika Dominikanina handamina hetsika UNWTO isam-paritra hifandona amin'ny datin'ny Vovonana WTTC.
Mahatsikaiky ny talen'ny WTTC, Gloria Guevara, nanasa an'i Zurab hanatrika sy hiteny amin'ny fihaonana an-tampony, saingy, mazava ho azy, tsy tanteraka izany. Tezitra ny mpikambana WTTC, ary tniala tsiny ny minisitry ny fizahan-tany ho an'ny Repoblika Dominikanina ary nahemotra ny hetsika UNWTO.
Tamin'ny 27 Mey 2021 izany, tany Riyadh, Saudi Arabia
Amin'ny lanonana ho an'ny ofanoratana ny foibem-paritry ny UNWTO any Riyadh, Arabia Saodita, ny sekretera jeneralin'ny UNWTO, Zurab Pololikashvili, dia nanatevin-daharana azy Andriambavy Haifa Al-Saud, Minisitra lefitra misahana ny fizahan-tany sy ny famatsiam-bola ary ny minisitry ny fizahan-tany ao amin'ny Fanjakana, ny Lehibeny Ahmed Al Khateeb mba sokafy amin'ny fomba ofisialy ny birao.
Nanatevin-daharana azy ireo koa ny minisitry ny fizahantany avy amin'ny faritra afovoany Atsinanana sy avy amin'ny faritra hafa manerantany, ary koa ny mpitarika avy amin'ny sehatra tsy miankina.
Ny Hon. Ny minisitra Edmund Bartlett avy any Jamaika sy ny Hon. Nanatrika ny fotoana ny minisitra Najib Balala, raha i Zurab Pololikasvili dia naseho tamina seho tao amin'ny efitrano malalaky ny hotely Ritz Carlton kintana 5 tao Riyadh.
Fa maninona i Zurab no tsy mahalala fomba toa an'i Maribel Rodriguez?
Zurab dia nitaky mafy ny hanasana ny WTTC tsy hanatrika ny fanokafana ny Centre Regional UNWTO any Riyadh, Saudi Arabia amin'ny 26 Mey 2021
Vokatr'izany, ny filoha lefitry ny WTTC, Maribel Rodriguez, dia nasain'ny mpikarakara tsy hanatrika ny lanonana. Nisy fotoana nandrahona i Zurab handao ny hetsika miaraka amin'ireo delegasiona miisa 80 raha avela hiditra i Maribel Rodriguez avy amin'ny WTTC.
Maribel Rodriguez dia nisolo tena tamin'ny fomba ofisialy an'i Gloria Guevara, tale jeneralin'ny Filankevitry ny fizahantany sy fizahan-tany manerantany (WTTC). Nidina avy tao an-tranony tany Madrid, Espana izy.
Maneho ny mpikambana ao amin'ny orinasa tsy miankina lehibe indrindra manerantany, WTTC dia manana andraikitra lehibe amin'ny fampisehoana fa mifandray ny sehatra tsy miankina sy tsy miankina amin'ny indostrian'ny fizahan-tany.
Tsy nisy ny fitarihan'ny UNWTO, WTTC dia afaka nitondra mpitarika maro avy amin'ny sehatra ho an'ny daholobe hanatrika ireo fivoriana isan-kerinandro ataon'ny fikambanana amin'ny valanaretina COVID.
Nanatevin-daharana ny WTTC i Maribel Rodriguez tamin'ny taona 2014. Nanangana tambajotra be dia be izy tao amin'ny sehatry ny fizahantany sy fizahan-tany ho an'ny daholobe sy tsy miankina, nahangona 20 taona ny varotra, ny marketing, ny serasera ary ny traikefa ara-barotra tany Eropa sy Amerika Latina teo amin'ny sehatry ny seranam-piaramanidina sy ny fandraisam-bahiny.
Izy dia talen'ny Executive Executive ary mpikambana ao amin'ny birao ho an'ny Travelodge Hotels Spain tamin'ny 2008 ka hatramin'ny 2014.
Talohan'izay dia nandany 11 taona tao amin'ny indostrian'ny fiaramanidina izy, nahazo traikefa lehibe tamin'ny lafiny rehetra amin'ny fiaramanidina ara-barotra, nitantana ny hafa ny fampidirana ny zotram-piaramanidina lafo vidy ho an'ny tsena Eoropeana atsimo ho an'ny Virgin Express, Go-Fly, EasyJet, ary Ryanair. Niasa tao amin'ny British Airways ho an'ny Espana, Portugal, ary France koa izy. Maribel dia manana MBA mpanatanteraka ao amin'ny ICADE Business School, mari-pahaizana momba ny psikolojia indostrialy avy amin'ny Oniversiten'i Salamanca, ary manana Program Senior Executive ho an'ny Travel & fizahan-tany ao amin'ny IESE & JSF. Mahay miteny anglisy, portogey, ary ambaratonga frantsay sy holandey tsara.
Maribel no olom-pirenena Espaniola voalohany manana an'io karazana fahefana mpanatanteraka ao amin'ny World Travel and Tourism Council.
Tsy te hanampy ny fikorontanana nitranga tao amin'ny Hotel Ritz Carlton Riyadh i Maribel. Tsy te-ho anisan'ny lalao kiakiaka izy, ary tsy te-hampahamenatra ny mpampiantrano - ny Governemanta Saudi Arabia.
Taorian'ny nilazana taminy fa tsy noraisina intsony izy dia nankafy ireo fotodrafitrasa tena tsara ao Ritz Carlton Riyadh trano fandraisam-bahiny kosa. Mbola nanolotra ny famelabelarany fohy izay kasaina ho an'ny andro manaraka foana izy.
Nahoana no zava-dehibe ny bitsika fampielezan-kevitr'i Anita Mendiratta omaly?
Mazava ho azy, fifanakalozan-kevitra momba ny vola - ao amin'ny UNWTO ihany koa - ary vola ho an'ny fizahantany dia avy any Arabia Saodita ankehitriny.
Miaraka amin'ny tale jeneralin'ny WTTC teo aloha Gloria Guevara izay miasa ho an'ny Governemanta Saudi Arabia izao, Zurab dia tsy maintsy nanamboatra ny toe-javatra naterany tany Riyadh.
Ny mpanolotsaina ambony ary namana akaiky manokana an'ny sekretera UNWTO Zurab Pololikashvili dia consultant Afrikana Tatsimo (monina ao London ankehitriny) Anita Mendiratta. Anita koa dia mpanolotsaina ambony an'i Dr. Taleb Rifai, sekretera jeneralin'ny UNWTO teo aloha.
Nandritra izany fotoana izany dia re fa niteny nanohitra ny Dr. Taleb Rifai Zurab Pololikashvili ampahibemaso.
Anita no olona nandamina fivoriana nifanaovan'i Zurab Pololikashvili sy Julia Simpson volana maromaro lasa izay talohan'ny nanombohan'ny Julia ny asa nanendrena azy tao amin'ny WTTC.
Ity fihaonana ity dia natao tao amin'ny trano fisakafoanana iray mihaja any London tamin'ny volana Mey, fotoana fohy taorian'ny nanambaran'ny WTTC ny fanendrena ny mpikambana ao amin'ny komity mpanatanteraka International Airlines Group (IAG), Julia Simpson, amin'ny maha filoham-pirenena sy CEO azy, manomboka ny 15 aogositra.
I Julia dia mbola tsy niasa tao amin'ny WTTC, fa ho an'ny IAG, rehefa nihaona tamin'i Zurab. Tsy mbola nampahafantarina azy koa ny momba ny asany vaovao amin'ny maha-CEO ho an'ny World Travel and Tourism Council.
Mazava ho azy, tsy nahalala ny fihenjanana misy eo amin'ny UNWTO sy WTTC i Julia ary ny sary dia nafenin'i Anita Mendiratta efa ho 4 volana talohan'ny nibitsihan'i Zurab sy Anita azy - noho ny antony hafa mihitsy.
Fanandramana sandoka UNWTO hanamboarana fifandraisana amin'i WTTC
Ny tsy firaharahiam-pifandraisana efa niasa nandritra ny taona maro napetraka teo ambanin'ny fitondran'ny UNWTO teo aloha, ary mamitaka ny besinimaro tamin'ny fandefasana ity bitsika ity tamina sary taloha, dia ohatra iray mahazatra ihany koa amin'ny fomba anambaran'ny sekretera jeneraly ny fivoarany. Mety ho vaovao avy amin'ny sarimihetsika James Bond io.
Namaly ny sioka navoakan'i Anita Mendiratta ity mpanoratra ity nilaza hoe:
Amin'ny fanajana rehetra Anita, ity dia lahatsoratra fampielezan-kevitra mora vidy.
Taorian'ilay sehatra naterak'i Zurab tany Arabia Saodita dia mazava be fa mankahala ny WTTC izy ary mahatsiaro ho tandindomin-doza izy ireo amin'ny fanaovana zavatra lehibe ary anisan'izany ny sehatry ny daholobe. Mila milaza bebe kokoa ve aho?
Oktobra 21, 2021 ao amin'ny 01: 35